IMercury yethu enothando kwiTaurus - Khetha Uphawu
IMercury yethu enothando kwiTaurus
Xa ucinga IMercury , izinto zokuqala ezithi qatha engqondweni bubukrelekrele, intshukumo, okanye into encinane, enobuqhophololo nobuqhophololo. Kuba okoko kuphawu lwe Aries , saba nethuba lokubona icala layo elikhawulezayo, elivuthayo, kwaye iincoko ezininzi zaphela njengeengxabano, iingcamango ezintsha ezimangalisayo zazalwa, kwaye abanye benu baqala uqeqesho, ukubaleka, okanye ukuhamba ngesantya. Kuya kufuneka ukuba ucinge ngomzimba wakho kunye nesiqhelo sakho, ucele umngeni ukwenza okuthile malunga nokusekwa kwakho ngendlela eguqukayo kumzimba wenyama. Ke le Mercury incinci ikhawulezayo iluphatha njani udonga ebetha kulo Taurus , yaye iya kuzisa ntoni ngoxa isenza amanyathelo awo acothayo, awonqena?
Inkanuko okanye Ukusebenza
Siyayazi iTaurus njengenenkanuko kunye nenkanuko ngendlela yobufazi, kodwa siphinde siyicinge njengeli cala leVenus apho ubuchule busekelwe khona kwaye yonke into ihamba kancinci de ulwaneliseko lufikelelwe. I-Mercury iya kunqabile ukuba ibe nomonde owaneleyo wokulinda iTaurus ukuba ibonelele ngayo yonke into efunekayo ukuhamba, kwaye unokucinga ngokucacileyo i-weasel kwintsimi yombona, ilindele ukukhula kwezityalo, ingenamonde ngokungathi ine-caffeine eninzi. Emva kokutyibilika ngokukhawuleza kwi-Aries, yile nto kanye iya kuba njalo kwiintsuku zokuqala zale ntshukumo kubantu abaninzi, kwaye uninzi lwethu luya kubetha kwiindawo ezithintelweyo kunye neemeko eziqinileyo ezingenakubonakala zitshintshile nangona sizama nzima. Ukuze sifezekise naluphi na usukelo esizimisele ukulufikelela, siya kudlula kwisiseve sokwenyani kwaye yonke into ebesicinga ukuba singayitsiba ngokulula okanye sidlule ngokukhawuleza iya kuba ngumqobo omkhulu kunoko bekulindelekile.
Kuphela njengokuba le Mercury iqala ukucinga malunga nokuchukumisa ithenda kunye nemivuzo yemali evela kumsebenzi ocothayo kunye nokuzinikela, iya kuthi yonke i-symbiosis yezi zibini izise inzuzo kwihlabathi lethu. Uthando luya kuzuzwa ngokuthetha ngokusondelana ngokwasemzimbeni kunye nokusondelana, urhwebo luya kukhula ngamaqhina osapho kunye nezithethe zemveli, kwaye uya kuziva ngathi uqhuba itrektara kunokuba upake le Porsche kwindlela yokungena kule nyanga iphela.
Ithuba kunye noMngeni
Ukusebenzisa onke amathuba le Mercury yasemhlabeni izisa, kufuneka ugxininise ingqondo yakho kumandla eNdalo, ukuzalwa kobomi, zonke iziyolo zokuchukumisa, uthando lomzimba, kunye namathuba emali afikelelekayo ngokuzingisa nokunyaniseka. Ukuba nenkani akuzi kuzisa ziphumo, kukubhetyebhetye kuphela, kwaye iimpendulo ziya kufumaneka emaphandleni okanye kwivenkile yepastry ekufutshane. Utshintsho kwindlela yakho kunye nokutya kwekhalori kunokuba bubulumko, kwaye izidlo kufuneka zibe zincinci, zonwabe, kwaye rhoqo. Eli licala elisebenzayo leMercury, kodwa linxulunyaniswe neemvakalelo ezingezi lula kulo, kwaye liya kuhlala lizama kakhulu ukugxila kwimbonakalo yeTaurus enengqondo, efana nezezimali, ibhanki, kunye norhwebo. Ingeniso iya kwenziwa ngamaphulo oshishino abandakanya ukutya kunye nezinto zendalo, kwaye akukho nto inganyanisekanga, eyenziweyo, okanye ubuso obubini iya kuhamba.
Umceli mngeni wayo yonke iMercury yasemhlabeni kukuqina kwayo kunye nokungakwazi ukuvumela iimvakalelo zihambe, kwaye esi sikhundla sinokujamelana nawe ngokungakwazi kwakho ukuvula intliziyo yakho, ukuvakalisa isimo sakho sengqondo sokwenyani, kunye nokunxibelelana nabathandekayo ukufikelela ukuqonda. Inyaniso yomba kukuba - ezi veki zizisa amathuba okunxibelelana kakuhle, namalungu osapho kunye nabo sisondelelene nabo, kwaye amazwi anobubele nathantamisayo aya kusinceda ukuba sizingise kuyo nayiphi na imingeni enokuthi ivele. Jabulela uhambo olucothayo lokufumana isiseko, utsibe loo fowuni yokutya inyama ebomvu evela efrijini, kwaye uya kuyibona ingqondo yakho icacile kunye neencoko zakho ezikhokelela kuzo zonke iintlobo zeenzuzo, ekugqibeleni wenze impembelelo eyakhayo kwingqiqo yexabiso lomntu okhulisayo ngaphakathi. .
Ngena Isagittarius Khetha Uphawu Capricorn Gemini